Ungakhuluma kanjani neziguli zakho mayelana nezengezo - Ukuphuma | Septhemba 2021
Ezempilo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Izindaba Imidlalo Cindezela Umphakathi, Inkampani Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo
Main >> Ukuphuma >> Ungakhuluma kanjani neziguli zakho mayelana nezengezo
Ungakhuluma kanjani neziguli zakho mayelana nezengezo
Iziguli zakho ziyema zikhulume nawe nsuku zonke ngemithi yazo kadokotela. Kungenzeka ukuthi babuza ngemiphumela emibi noma isikhathi somthamo. Ngemuva kwalokho, ubuyekeza iphrofayili yabo yemithi yesiguli ( PMP ) ukuqinisekisa ukuthi imishanguzo kadokotela iphephile ukuthi ingathathwa ndawonye. Kepha kuthiwani ngemikhiqizo engekho ohlwini kumaphrofayli abo kadokotela?
Iziguli eziningi zithatha isengezo esisodwa noma ngaphezulu sokuthenga ngaphezu kwemiyalelo yazo. Eqinisweni, abantu abadala abangama-77% eMelika bathatha izithasiselo zokudla, ngokusho kwe- Ucwaningo Lwabathengi be-CRN lwango-2019 mayelana Nezithasiselo Zokudla . Ezinye izithasiselo zingathinta ukuthi imiyalo yabo isebenza kanjani, ngakho-ke kubalulekile ukukhuluma ngakho. Kepha uzenza kanjani iziguli zakho ukuthi zivule?
Buza imibuzo evulekile ukuvuselela uhlu lwemithi yesiguli
Uma weluleka iziguli, uvame ukugxila emithini abayisebenzisayo ngaleso sikhathi, kepha futhi lesi yisikhathi esihle sokubheka ezinye izindlela zokwelashwa. Osokhemisi bangumthombo ofinyeleleka kakhulu wolwazi oluthembekile kuzona zombili izithasiselo nemithi kadokotela.
Ungavula ingxoxo ngokuthi ngibuyekeze imithi esinayo efayilini ekhemisi. Yimiphi eminye imithi noma izengezo ezithengwa ekhawunteni ozithathayo njengamanje? Ezinye iziguli zingakhathazeka ngokuthi ungabahlulela ngokusetshenziswa kwazo kokungezelela, ngakho-ke kubalulekile ukuba nengxoxo elula, evulekile.
Njengochwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo, ulimi lwakho lomzimba lungathinta nokuthi isiguli sikhululeke kangakanani ukukuvulela. Uma kungenzeka, hlala nesiguli nibe nengxoxo. Yazisa isiguli ukuthi kungani ubuza ngokusetshenziswa kwesengezo. Yize izithasiselo eziningi zingadlala indima ebalulekile empilweni yesiguli sakho, kungenzeka ukuthi zingahlangani kahle nemithi kadokotela.
Yize ucwaningo lweCRN lukhombisa ukuthi ama-30% wabantu abadala athatha izithasiselo ngempilo yabo yonke, Izizathu zeziguli zakho ezikhetha izengezo zempilo yazo zingazwela. Izimo ezinjengokudangala nokukhathazeka akulula ngaso sonke isikhathi ukukhuluma ngazo, futhi kungenzeka ukuthi iziguli zakho zikhethe ukuzelapha ngama-supplements kunokuxoxa ngalezi zimo nabahlinzeki bazo bezempilo. Ukuzwela endleleni yakho yokusebenza kuzokusiza ukuthi uzuze ukwethenjwa yisiguli sakho ukuze nibe nengxoxo ephumelelayo.
yimuphi umthamo we-viagra okufanele ngiwuthathe
OKUSHIWO: Izinhlobo ezintathu zemithi ezingaba nokusebenzisana kwamavithamini
Izithako ezidumile zeziguli
Amavithamini namaminerali yizithako ezithandwa kakhulu, ngokusho kwe- Ucwaningo lweCRN , kulandelwa izithako ezikhethekile (okungukuthi, ama-probiotic), amakhambi kanye ne-botanicals (i-turmeric, i-CBD), izithasiselo zokuqina komzimba (amaprotheni) , nezithasiselo zokwehlisa isisindo. Kunezithasiselo eziningi iziguli zakho ezingabuza ngazo, kepha kunezimbalwa eziyizihloko ezishisayo.
OKUSHIWO: Imaphi amavithamini okufanele ngiwathathe?
Imikhiqizo ye-CBD (cannabidiol) kungenye yezindlela ezikhula ngokushesha emakethe embonini yokwengeza. Kwamanye amadolobha, kunezindawo ze-CBD ezivulwa kuzo zonke izikhungo ezinkulu zokuthenga. I-CBD icatshangwa ukuthi inikeze impumuzo ezimpawu ezihambisana nakho konke kusuka ekuphazamisekeni kokuquleka nokukhathazeka ukuya enhlizweni nasekuvuvukeni. Lokhu kuthinta kanjani iziguli zakho?
Njengoba kungenzeka uyazi, imikhiqizo ye-CBD ifakwa emzimbeni yi-cytochrome P-450 enzyme system efanayo esebenza ngemithi eminingi kadokotela. Uma iziguli zakho zisebenzisa inani elibalulekile lemikhiqizo ye-CBD, ukuthinteka kwazo kweminye imishanguzo kungathinteka, kwesinye isikhathi okungaholela emiphumeleni emibi. Isibonelo, i-CBD inganciphisa imetabolism yezidakamizwa ezinciphisa i-cholesterol. Lokhu kungaholela ekukhuphukeni kwamazinga egazi ama-statins, ngakho-ke izehlakalo eziphakeme zemiphumela emibi njengobuhlungu bendlela. I-CBD ibuye ihlotshaniswe nokwehlisa umfutho wegazi. Lokhu kungaba nomphumela wokungezwa ngama-ejenti kadokotela ahloselwe ukunciphisa umfutho wegazi. Isiguli singathola i-bradycardia, isiyezi, noma eminye imiphumela emibi yomfutho wegazi ophansi kakhulu.
Yini enye okudingeka iziguli zami zazi ngama-supplements?
ISt. John's Wort kungenye yezithako ezithandwayo. Kudala kucatshangwa ukuthi kusiza ukuthuthukisa imizwa, ukudangala, kanye nezimpawu zokuya esikhathini — kodwa futhi kunokuxhumana okuthile okuphawulekayo nemithi kadokotela. Kuyindida ukuthi okunye ukuxhumana okuphawuleka kakhulu emtholampilo kunemithi kadokotela ehlose ukuphatha izimpawu ezifanayo. I-St. John's Wort kucatshangwa ukuthi ikhulisa amazinga e-serotonin ebuchosheni. Ama-anti-depressants adumile, njenge-fluoxetine, asebenza ngokwandisa i-serotonin. Imiphumela eyengeziwe yalezi zinto ezimbili ezisetshenziswe ndawonye ingaholela kwi-serotonin etholakala kakhulu. Lokhu kungashiya isiguli sithinteke umfutho wegazi ophansi, ukujuluka, noma izinguquko zesimo sengqondo esingesihle.
kuphephile yini ukuhamba ngaphandle ngesikhathi se-coronavirus
Imiphumela emibi yezithasiselo
Ngaphandle kokusebenzisana nodokotela, kubalulekile ukumboza imiphumela emibi engaba khona yezithasiselo. I-St. John's Wort, ngokwesibonelo, ingadala ukuqwasha noma ukucasuka. Isiguli esilwa nezimpawu zokudangala noma zokuya esikhathini kungenzeka ukuthi sesivele sibhekene nalezi zinkinga, kanti iSt. John's Wort singazenza zibe zimbi kakhulu. Lapho unika iziguli zakho ulwazi, zingakuqonda ngokugcwele okufanele zikulindele.
Imikhiqizo yokwengeza esezingeni eliphakeme
Kubalulekile ukwazisa iziguli ukuthi ukukhiqizwa kwama-supplements akulawulwa ngokuqinile njengaleyo yemithi kadokotela, ngakho-ke bangaqiniseka ukuthi isengezo sayo sivela emthonjeni onedumela. Ngokufundisa iziguli zakho, ungazivimbela ekutholeni imikhiqizo esezingeni eliphansi, noma elimazayo. Ungancoma izengezo zebanga lezemithi kusuka ku- enye yezinkampani ezilandelayo :
Izithasiselo ziyingxenye enkulu yempilo yesiguli sethu, futhi osokhemisi bakulungele ukuba nezingxoxo ezifundisayo neziguli zabo mayelana nazo. Ulwazi lwakho luba ngamandla abo, ngakho-ke qiniseka ukubenza bakhulume nawe ngokusetshenziswa kwabo kokungezelela.
Imiphumela emibi ye-Albuterol nokuthi ungakugwema kanjani
I-claritin izovela ekuhlolweni kwezidakamizwa
inamandla kangakanani i-klonopin uma iqhathaniswa ne-xanax
ungasusa kanjani izifo zemvubelo
ekuphumuleni isilinganiso esivamile senhliziyo yabantu abadala akufanele singeqi
bangaki abantu abatholwa ukuthi banexhala
kufanele ngithathe i-tamiflu uma ivezwe umkhuhlane